एप्पल आभासी वास्तविकता को बारे मा गम्भीर छ आईफोन समाचार
यसको भर्खरको भाँडा अनुसार एप्पल भर्चुअल रियलिटीको बारेमा गम्भीर छ
त्यस पछि पहिरनमिल्ने वा पहिरिन योग्य उपकरणहरू र सायद स्वायत्त कारहरू अघि, यस्तो लाग्छ कि "नेक्स्ट बिग थिंग" यससँग सम्बन्धित छ वर्चुअल रियल्टी (VR) त्यहाँ पहिले नै धेरै कम्पनीहरू छन् जुन काम गरिरहेका छन् र केहि परियोजनाहरू उपलब्ध छन्, जस्तै सामसु and र माइक्रोसफ्ट, र यस्तो देखिन्छ कि भविष्यमा पनि एप्पल यस भर्चुअल संसारको हिस्सा बन्न चाहन्छ। हामीले भर्खरका खरीदहरू र भाडामा लिएका छौं जुन कपर्तिनो मानिसहरूले गरेका छन्।
वित्तीय टाइम्सका अनुसार, एप्पलले एक महत्त्वपूर्ण व्यक्तिलाई काममा लिएको छ आभासी वास्तविकता को क्षेत्र मा: डग बोमन। टिम कुक र कम्पनीको नयाँ हस्ताक्षरले त्रि-आयामिक प्रयोगकर्ता इन्टरफेस डिजाइन र भर्चुअल वातावरणमा विसर्जनका फाइदाहरूको अनुसन्धानमा आधारित छ। उसको अनुभवले दुबै इमर्सिभ भर्चुअल रियलिटी र संवर्धित वास्तविकता समाहित गर्दछ, जहाँ पारदर्शी स्क्रीनले वास्तविक वातावरणको केही भागमा वस्तुहरू देखाउँदछ, जस्तै माइक्रोसफ्टको होलोलेन्स वा गुगल ग्लास।
एप्पल वर्चुअल रियलिटी मा शर्त हुनेछ
VR को सम्बन्धमा एप्पलले गरेका यो पहिलो कदम होइन। बोमानको भाडा लिनको अधिग्रहण थप गर्दछ तीन कम्पनीहरु VR वा AR मा विशेषज्ञता (संवर्धित वास्तविकता): मेटाइओ मे महिनामा, फेसशिफ्ट नोभेम्बर र भावनात्मक केही हप्ता पहिले यदि हामी यो सबै थप्छौं, यस्तो देखिन्छ कि भविष्यमा एप्पलले यस प्रविधि सम्बन्धी केहि योजना बनाएको बाहेक अरू कुनै सम्भावना छैन।
अन्य कम्पनीहरूको उपकरणहरू हेरेपछि, एउटा कुरा स्पष्ट छ: एप्पल आभासी वास्तविकता बजारमा तुलनात्मक रूपमा ढिला हुनेछ। तर एप्पल एक त्यस्तो कम्पनी हो जुन विशेषता बनाउँदैन जुन डिभाइस निर्माण गर्ने पहिलो हो, यदि होइन भने सुधार गर्नुहोस् र अवस्थित टेक्नोलोजीलाई शीर्षमा लैजानुहोस्। यो आईपड (एक mp3) जस्ता उपकरणहरू, आईफोन (एक मोबाइल) र एप्पल वाच (स्मार्ट वाच) को साथ उसले पहिले नै गरिसक्यो। के देख्न बाँकी छ कि तिनीहरू भर्चुअल वास्तविकतामा थप गर्दछन् र यदि तिनीहरू प्रत्येक घरमा एक VR उपकरण छ भने। समय बताउनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » धेरै » यसको भर्खरको भाँडा अनुसार एप्पल भर्चुअल रियलिटीको बारेमा गम्भीर छ
पाब्लो अपारीसियो लाई: नमस्कार, कस्तो छ? तपाईं कृपया स्वत: लोडि,, स्वत: पत्ता लगाउने वा यसलाई भनिने जेसुकै पनि अक्षम गर्नुहोस् जुन मेरो आईप्याडलाई मोबाइल उपकरण मोडमा हालको आईफोन हेर्न बल गर्दछ। मलाई थाहा छैन यदि तपाईंलाई थाहा छ भने, तर वेब पृष्ठहरूका "मोबाइल" संस्करणहरू सबैभन्दा खराब आविष्कार हुन्। र डेस्कटप संस्करण हेर्न म बटन थिच्ने कति पनि फरक पर्दैन, यसले कार्य गर्दैन, यसले मोबाइल संस्करण लोड गरिरहन्छ।
मलाई तपाईंको नोटबुक मनपर्‍यो तर यदि मैले यो देख्न सकेन र / वा मज्जा लिन सकेन भने मलाई डर लाग्छ कि हामी यसलाई हेर्न छाड्नेछौं।
नमस्कार म यसलाई संयोजकसँग छलफल गर्नेछु। तर सबै भन्दा पहिले, तपाईं उसलाई कसरी यो आफ्नो डेस्क मा राख्न भन्न? यदि तपाईं दोस्रो रिलीज नगरी रिफ्रेस पृष्ठ एरोमा थिच्नुहुन्छ भने, यसले तपाईंलाई डेस्कटप मोडमा प्रवेश गर्न अनुमति दिन्छ। यसले मलाई जस्तो समस्या दिदैन।
गुगलले एप्पललाई १ अरब डलर भुक्तान गर्यो आईफोनमा आफ्नो खोज इञ्जिन राख्न
एप्पलले मेक्सिको र ह Hongक Kongका लागि सार्वजनिक यातायातका बारे जानकारी प्रस्ताव गर्दछ